Dhibaatada lasoo daristay arday - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Waa arday ama qof dhowr qof ay cidhiidhi iyo dhibaatada u geysta kaligii
Dhibaatada lasoo daristay arday
La daabacay fredag 28 januari 2011 kl 10.27
Waxaa kor u kacay dhibaatooyinka iyo cidhiidhiga lagu galiyo ardayda qaarkood iskuullada (mobbning). Waa arday ama qof dhowr qof cidhiidhi iyo dhibaato ey u geeystaan kaligii, middaasina oo labo jibaarantey sanadkii hore.
Sanadkii 2009 ayaa qiyaastii dacwadooda la diiwaan galiyey 600, meesha kii ka horeeyay 2010 ay la yimaadeen dacwooyin dhan 1.100. Taa waxaa lagu soo saarey tirakoob hor-dhac ah oo aan dhammaystirnayn oo ay soo saaridiisa ka danbaysay hayadda u xil saaran ilaalinta xaquuqda caruurta. Waxaana kala qeeyb galay u kuurgalkan joornaalka DN.
Dacwooyinkaan ka dhanka ah dhibaatooyinka iyo cidhiidhiga lagu galiyo ardayda qaarkood iskuullada (mobbning) ayaa inta badan isku geeystaan ardaydu dhexdooda, meesha ay 500 oo tiradaas ka mid ah ay dhibka u geeystaan shaqaalaha iskoolka kuwo ka mida.